इमर्सिभ मार्केटि,, पत्रकारिता र शिक्षाको आगमन | Martech Zone
भर्चुअल र संवर्धित वास्तविकता तपाईंको भविष्यमा ठूलो भूमिका खेल्न गइरहेको छ। टेकक्रन्च भविष्यवाणी गर्दछ त्यो मोबाइल एआर सम्भवतः years बर्ष भित्रमा $ १० बिलियन बजार हुनेछ! यदि तपाईं अत्याधुनिक प्रविधि कम्पनीको लागि काम गर्नुहुन्छ वा शोरूममा अफिस फर्निचर बिक्री गर्ने हो भने त्यसले केही फरक पार्दैन, तपाईंको व्यवसायलाई कुनै तरिकामा इमर्सिभ मार्केटि by अनुभवले फाइदा पुर्‍याउँछ।
VR र AR बीच के फरक छ?
भर्चुअल रियलिटी (VR) प्रयोगकर्ताको वरिपरि वातावरणको एक डिजिटल मनोरन्जन हो, जबकि संवर्धित वास्तविकता (एआर) वास्तविक संसारमा भर्चुअल तत्वहरूलाई ओभरले गर्दछ।
मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? VR / AR लाई अँगालेको केहि उद्योगहरुलाई हेर्नुहोस्।
यस हप्ता CNN ले एक समर्पित VR पत्रकारिता एकाई शुरू गर्‍यो। यो समूहले news 360० भिडियोमा मुख्य समाचार घटनाहरूलाई कभर गर्दछ र दर्शकहरूलाई अगाडि पंक्ति सिट प्रदान गर्दछ। के तपाईं एक युद्ध क्षेत्रमा पहिलो मोर्चामा हुन को लागी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को ह्वाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग मा एक पहिलो पंक्ति सीट छ, वा एक तूफान को आँखो मा खडा? यही कुरा इमर्सिभ पत्रकारिताले टेबुलमा ल्याउनेछ, जहाँ हामीलाई पहिले भन्दा कहानी अझ नजिक बनाउँदछ। CNN ले VR भिडियो स्टोरी प्रकाशित गरेर नयाँ इकाई सुरू गर्‍यो स्पेनमा गोरूहरू दौडँदै.
बितेको वर्षमा, सीएनएनले वी.आर. को साथ प्रयोग गरेको छ, quality० भन्दा बढी समाचार कथाहरू उच्च-गुणवत्ता 50 video० भिडियोमा उत्पादन गर्दछ, जसले दर्शकहरूलाई एलेप्पोको विध्वंसको गहिरो समझ प्रदान गर्दछ, अमेरिकाको उद्घाटनको पहिलो प row्क्ति दृश्य र थ्रिल अनुभव गर्ने मौका। स्काइडाइभिiving को कुल -, केवल फेसबुक मा 360 30० सामग्री को 360० मिलियन भन्दा बढी दृश्य उत्पन्न। मुहान: सीएनएन
लोभले आफ्नो बेट हेज गरिरहेको छ कि VR ले घर सुधार उद्योगमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। उनीहरूले इन-स्टोर भर्चुअल रियलिटी अनुभव सुरू गरिरहेका छन् ग्राहकहरूलाई हेन्ड-अन शिक्षा दिनको लागि मोर्टार वा बिछाउने टाइल जस्ता परियोजनाहरूका लागि। एक परीक्षणमा लोवको रिपोर्ट छ कि ग्राहकहरु संग एक थियो कसरी परियोजना पूरा गर्ने को 36all% राम्रो सम्झना यूट्यूब भिडियो हेर्ने मानिसहरूसँग तुलना गर्नुहोस्।
लोको प्रचलन समूहले फेला पारे कि सहस्राब्दीहरू DIY प्रोजेक्टहरूको लागि छन् किनभने उनीहरूसँग घर सुधारको आत्मविश्वास र परियोजनाको लागि निःशुल्क समयको अभाव छ। लोवको लागि, भर्चुअल वास्तविकता त्यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउने माध्यम हुन सक्छ। मुहान: सीएनएन
मार्केटिंग दृष्टिकोणबाट, इमर्सिभ मार्केटिंग अवधि पूर्ण रूपमा परिभाषित भइरहेको छ। एक सजिलै कल्पना गर्न सुरु गर्न सक्दछ कि विज्ञापन, उत्पाद प्लेसमेन्ट, र एक ब्रान्ड प्रदर्शन गर्न रचनात्मक तरिकाहरूको लागि कति अवसरहरू उत्पन्न हुन्छन्। VR मार्केटरहरु को लागी धेरै समस्याहरु हल गर्दछ। यसले हामीलाई इमर्सिभ अनुभव सिर्जना गर्ने एउटा तरिका प्रदान गर्दछ जुन प्रभावकारी, अविस्मरणीय, र रमाईलो छ। यो भन्दा राम्रो प्राप्त गर्दैन!
तपाइँको लागि केहि अधिक चाखलाग्दो तथ्यहरू। Vimeo भर्खर जोडियो upload 360०-डिग्री भिडियोहरू अपलोड र हेर्न क्षमता। यसले फिल्म निर्माताहरू र अन्य रचनात्मकहरू case 360० सामग्री प्रदर्शन र बेच्न प्रस्ताव गर्दछ। कि त फेसबुक को बारे मा नबिर्सनुहोस्। आज सम्म त्यहाँ एक मिलियन भन्दा बढी-360०-डिग्री भिडियो र पच्चीस लाख 360 XNUMX०-डिग्री फोटो पोस्ट गरिएको छ। यो प्रवृत्ति जारी रहने छैन सोच्ने कुनै कारण छैन।
हामी VR / AR को भविष्य मा तपाइँको विचार सुन्न चाहन्छौं। यसले तपाईंको उद्योगमा कस्तो असर पार्छ जस्तो लाग्छ? कृपया साझेदारी गर्नुहोस्!
टैग: cnnलुक्नइमर्सिभ शिक्षाइमर्सिभ पत्रकारिताइमर्सिभ मार्केटिंगलोभकोहोलोरोम कम गर्दछVimeoVimeo। 360०
बिग डाटा के हो? ठूला डाटाका फाइदाहरू के हुन्?